खोई सामाजिक दुरि ?खोई शारिरिक दुरि ? खोई नियम पालना ?
जनता भ्वाइस calendar_today ६ बैशाख २०७७, 2:50 am
६ वैशाख, रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको मन्थली बजार क्षेत्रमा हुल हुल मान्छे सडकमा निस्केको देखियो । सडक सँगै पसलहरूमा पनि हुल मान्छे देखियो । तर, त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति भए पनि उनीहरुलाई सम्झाउने बुझाउने केहि गरेको पाईएन । सँग सँगै जस्तो बसेर सामान किनमेल गरिरहेका थिए । त्यहाँ न प्रहरिले केहि भन्यो न व्यापारीले नै ।
यी दृश्य मन्थलीमा लकडाउनमा सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ, शारिरिक दुरि कायम गर्नु पर्छ भन्ने तथ्यको उलंघन हुँदै आएको प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् ।सामान खरिद गर्दा पनि कम्तीमा ३ फिट दुरि कायम गर्नु भनेर सरकारले मापदण्ड तोकेको छ । दिन भरि जसो मान्छेको हुल मन्थली भन्दा अलिक माथी रणजोर खोलामा रहेको पुलमा भेटिन्छ । मानिसहरू भैसेश्वरको छेउमा रहेको पुलको अलिक माथी भलिबल खेलेर मज्जा लिई रहेका भेटिन्छ । तामाकोशीको तिरमा मनग्गे मानिस भेटिन्छन् । झनै हाटेचौरमा पुग्दा यस्तो लाग्छ त्यहाँ सामाजिक दुरि सँगै लकडाउनको नाम निशाना नै छैन । मान्छेहरु हुल बाँधेरै सडक भन्दा अर्को बाटो निस्कने गरेका छन् । चोकमै बसेर चिया पसलमा गफ लगाउँदै बस्ने गरेका मानिस अझै भेटिन्छन् । नागरिकले लकडाउनलाई बोझको रुपमा लिएको पाईन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनका कारण अहिले हरेक गतिविधि ठप्प छ । र, सरकारले विभिन्न माध्यमबाट ‘घरमै बसिदिन आग्रह’ गरेको छ ।
तर, मन्थलीका जनता स्वयंले भने लकडाउनको उलंघन गर्दै बाहिरिरहेका छन् । कोही साँझ डुल्न हिँडेको देख्न सकिन्छ भने कुनै मर्निङवाकमा । जति सुकै सामाजिक दुरी नबनाईए पनिर लकडाउनको उल्लङ्घन गरे पनि कसैलाई कारबाही भने भएको छैन । हिजो एकै दिन १४ जना संक्रमित थपिए सँगै अहिले सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या ३० पुगेको छ ।